Man United, Arsenal oo badiyey, Tottenham oo la garaacay & warar kale EPL – SBC
Man United, Arsenal oo badiyey, Tottenham oo la garaacay & warar kale EPL
Posted by editor on Diseenbar 12, 2011 Comments
Kulamadii 15-aad ee horyaalka English Premier League ayaa la ciyaaray maalmihii sabtidii iyo Axadii, iyadoo uu dhiman yahay kulan adag oo caawa magaalada Galbeedkeeda ku dhexmari doono kooxaha Chelsea & Manchester City oo 14-kii kulan ee hore aan dhulka la dhigin dhinaceeda, balse Chelsea ay caawa doonayso inay dhulka ku legado waase hadii ay u suurtagashee.
Arsenal oo guul caaqibo leh ugu dabaaldegtey sanadguuradeedii 125-aad
Arsenal ayaa ka gaartey guul wax ku ool u aheyd oo ku soo aaday sanadguuradeedii 125-aad kulan adag oo ka dhacay garoonka Emirates Stadium ee waqooyiga London oo ay marti ku aheyd kooxda Everton ee ka dhisan magaalada Liverpool.
Weerayahanka shidan ee kooxda Arsenal Robin van Persie ayaa gool Arsenal baahi weyn u qabtey oo u suurtagaliyey sadex dhibcood oo nadiif wuxuu 20 daqiiqo ciyaarta oo ka dhiman tahay uu ku hubsadey shabaqa Everton, kaasi oo noqdey goolkiisii 15-aad ee xili ciyaareedkan uu dhaliyo, waxaana wadar ahaan uu ka dhigan yahay 33 gool oo uu dhaliyey sanadkan 2011 isagoo sadex gool oo qura ka dambeeya Alan Shearer oo haysta rikoorka 36 gool.
Guusha Arsenal waxay kaloo u xaqiijisay in markii ugu horeysay xili ciyaareedkan ay gaarto afarta kooxood ee ugu horeeya ee ka qayb gali kara Champion League-ga.
Inkastoo fursado badan ay iska qasaariyeen ciyaartoyda Arsenal sida Theo Walcott, Gervinho & Aaron Ramsey hadana waxay Arsenal orod iyo hardan adag ugu jirtey in ay guusha kulanka la hoyoto.
Kooxda martida aheyd ee Everton oo 16 kulan oo ay marti ku soo noqotey garoonka Arsenal 14 kulan kala tagtey guuldaro waxay 90-kii daqiiqo ee ciyaarta loogu tagal galey sameysay hal isku day gool oo kaliya kaasi oo daqiiqadihii dambe ay ku sigtey goosha Arsenal, waxaana ay u muuqanaysay Everton in ay difaac ku jirtey, waxaana ugu dambeysay garoonka Arsenal leedahay oo ay ku badiso sanadkii 1996-dii. .
Tababaraha Everton David Moyes oo saxaafada la hadley kulanka ka dib wuxuu sheegay in uu ka niyad jabsan yahay natiijada maadama qaybtii hore ee ciyaarta 0-0 lagu kala nastey, waxaase uu sheegay in goolka Van Perisie uu ahaa gool caaqibo leh oo weyn, isla markaana Arsenal ay tahay koox weyn.
“Waa inaan siiyaa amaan Van Persie, ulama jeedin inaan siino iyaga (Arsenal) fursad laakin waa koox weyn” ayuu sii raaciyey hadalkiisa tababaraha Scottish-ka ah.
Van Persie (Daqiiqadii 70-aad)
Garoonka lagu ciyaaray ee Emirates ee kooxda Arsenal waxaa soo xaadiray daawadayaal 60,062 qof.
Man United oo caradii Champion League-ga kula duldhacdey kooxda Wolves
Min laba gool oo ay dhaliyeen Wayne Rooney & Luis Nani ayaa wax uun ilko cadeyn ah dib ugu soo celiyey kooxda Manchester United oo dhakafaar & dhabanaheys ka soo qaadey guuldaradii ka soo gaartey u soo bixid la’aanta wareega 16-ka ee Champions League.
Manchester United oo ku ciyaareysay gurigeeda Old Trafford waxay afar gool ku garaacdey kooxda martida u aheyd ee Wolves, waxaana afartan gool ay meesha ka saareysaa abaar ka haysatey goolal badan oo ay ku badiso iyadoo shantii kulan ee ugu dambeysey Premier League ku soo badisay ama ku gashay barbardhac min hal gool oo madi ah.
Laakiin ciyaarta oo 2-0 shan daqiiqo ka dib markii laga soo laabtey nasiimadani ayaa ciyaaryahan Steven Fletcher wuxuu rajo soo galiyey kooxda martida ah ee Wolves ka dib markii uu kubada madaxa uu la helay uu ku hubsadey shabaqa Manchester United.
Labada gool ee uu dhaliyey Wayne Rooney waxay sidoo kale ka saartey abaar gool la’aan oo haysatey 8 ciyaarood oo ka mid ah Premier League-ga ama sadex bilood oo xiriir ah.
Guusha ay Man United gaartey waxay laba dhibcood oo kaliya u jirsanaysaa kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Manchester City oo hogaanka xiligan haysa, taasi oo habeenimada Isniinta magaalada London marti ugu noqon doonta kooxda Chelsea.
Goolasha Man United
Nani (Daqiiqadii 17-aad)
Rooney (Daqiiqadii 27-aad)
Nani (Daqiiqadii 56-aad)
Rooney (Daqiiqadii 62-aad)
Fletcher (Daqiiqadii 47-aad)
Garoonka Old Trafford ee kooxda Manchester United waxaa soo xaadiray 75,627 qof.
Liverpool oo guul jilicsan ka gaartey kulan adag oo ay la yeelatey QPR
Luis Suarez ayaa dhaliyey goolka kaliya ee ay ku badisey kooxda Liverpool oo garoonka Anfield Stadium ku qaabishay kooxda Queans Park Rangers (QPR) oo sanadkan ku cusub Premier League.
Liverpool waxay ka badbaaday shan kulan oo isku xiga oo ay gurigeeda ku gashay barbar dhac, iyadoo kaalinta lixaad ka gashay kala horeynta kooxaha.
QPR waxay 69 daqiiqo ku haysay 0-0 Liverpool laakiin ciyaaryahanka ay ku socoto dacwadaha la xiriira cunsirinimada & aflagaadada Suarez ayaa kubad uu soo qaaday Charlie Adam oo uu madaxa la helay wuxuu ku hubsadey shabaqada kooxda martida aheyd isagoo ka dhigay ciyaarta 1-0.
Goolkan uu dhaliyey Luis Suarez oo bisha soo socota ee January 25 sano jir noqonaya wuxuu ahaa goolkiisii ugu horeeyey ee uu dhaliyo tan iyo 1-dii bishii October oo uu dhaliyo kulamada Premier League-ga.
Suarez (Daqiiqadii 47-aad)
Garoonka la isku arkey ee Enfield ee kooxda Liverpool waxaa ku sugnaa 45,016 qof oo daawadayaal ah.
Newcastle oo ay u da’ayso daruurtii guuldarada
Kooxda Newcastle oo xili ciyaareedkan Premier League-ga ku bilowdey wacdaro la yaab leh ayaa waxaa wali u hooreysa daruurtii guuldarada, iyadoo afartii kulan ee ugu dambeysay oo isku xiga sadex ka mid ah dhagaha laga garaacay, taasi oo u bilaabatey kulankii ay martida ugu noqotey kooxda Manchester City 19-kii November, waxaana kulanka kaliya ee ay barbar dhac gashay uu ahaa kii ay Man United kula yeelatey Old Trafford 26-kii bishii hore ee November.
Newcastle oo todobaadyo ka hor la saadaalinayey inay meel wanaagsan ka gaari karto afarta kooxeed ee ugu horeeya Premier League-ga waxay todobaadkan marti u aheyd Norwich City iyadoo wacdaro ba’an uu ka qabsadey kulankaasi ka dib markii 4-2 lagu soo sagootiyey isla markaana ciyaaryahan uu ka qaatey kaarka cas.
Norwich City waxay ku soo dhaweysay Newcastle gool ay kaga naxsatey qaybtii hore ee ciyaarta kaasi oo uu dhaliyey weeraryahanka khadka dhexe Wes Hoolahan, waxaase isla qaybtii hore ciyaarta ka dhigay 1-1 xidiga Muslimka ah ee ka soo jeeda wadanka Senegal Demba Da.
Laakiin qaybtii dambe iyadoo 1-1 lagu kala joogo ayaa Grant Holt wuxuu mar kale uu siiyey hogaanka ciyaarta kooxda loo martida ahaa, waxaase Newcastle madax xanuunku uu ku sii batey markii shan daqiiqo ka dib goolkaasi uu kubad madaxa uu la helay Steve Morison uu kaga shanqariyey shabaqada naadiga martida ahaa iyadoo ciyaartii ay noqotey 3-1 oo ay hogaanka ku hayso Norwich City.
Laakiin 8 daqiiqo ka dib Newcastle waxaa ku soo laabatey neefta ka dib markii weeryahanka Demba Ba oo uu dhaliyey goolkiisii labaad ee kulankaasi kaasi oo ka dhigan goolkiisii 11 goolasha uu dhaliyey Premier League-ga 2011/2012.
Waxaase xaajadu faraha ka baxdey oo ay Newcastle neeftu ku ceshantay markii ciyaarta oo ay ka dhiman tahay 7 daqiiqo oo goolkii quusinta dhaliyey Grant Holt kaasi oo ka dhigay natiijada 4-2 oo ay guushu ku raacdey Norwich City, iyadoo Newcastle uu ka qaatey kaarka cas Dan Gosling oo qalad ku galey ciyaaryahan Russell Martin.
Norwich afar gool ay ku badiso kulan ka tirsan Premier League waxaa ugu damebysay ciyaar bishii January 2005-tii gurigeeda ay kula gashay kooxda Middlesbrough taasi oo ku soo gabagabowdey 4-4.
Ciyaaryahan Steve Morison wuxuu dhaliyey shan gool lixdii kulan ee ugu dambeysay kulamada ay ciyaartey Norwich ee Premier League-ga.
Ma la socotaa ?
Grant Holt oo 14 kulan u saftey Norwich wuxuu leeyahay 6 gool, mase la socotaa in ciyaaryahan Holt mudo laga joogo 15 sano uu ahaa makaanik ka shaqeeya garaashyada ku shaqada leh farsamada taayirada gawaarida.
Goolasha Norwich City
Hoolahan (Daqiiqadii 39-aad)
Holt (Daqiiqadii 59-aad)
Morison (Daqiiqadii 63-aad)
Holt (Daqiiqadii 82-aad)
Ba (Daqiiqadii 45+1)
B (Daqiiqadii 71-aad)
Garoonka lagu dagaalamey ee Carrow Road ee kooxda Norwich City waxaa soo xaadiray 26,816 qof.
Stoke City oo Tottenham ka jabisay 11 kulan oo aan dhinaceeda dhulka la dhigin
11 kulan oo aan laga badin kooxda Tottenham ee galbeedka London ka dhisan ayaa waxaa jabisay kooxda Stoke City oo gurigeeda Stadium Britaina marti loo ahaa.
Ciyaaryahan Matthew Etherington oo sanadihii 2000 ilaa 2003 u ciyaari jirey Tottenham ayaa qaybtii hore ee ciyaarta wuxuu dhaliyey labada gool ee ay ku badisay Stoke City, waxaase Tottenham ay la timid hal gool oo ahaa oo gool ku laad oo uu u saxiixay weeryahanka amaahda ula jooga Emmanuel Adebayor.
Gool ku laadka Tottenham ay heshay ayaa ku yimid ka dib markii daafaca Stoke Glenn Whelan uu dhulka dhigay xidiga khadka dhexe Modric oo kubad la soo galey soohdinta goosha.
Goolkaasi wuxuu siiyey waxoogaa niyad ah ciyaartoyda Tottenham balse Stoke oo waligeed hal mar oo kaliya laga badiyey 22 kulan oo ay laba gool la hormartey qaybta hore ee ciyaarta ayaa dhexda u xiratey sidii ay u xaqiijisan laheyd guushan muhiimka ah u aheyd.
Tababaraha Tottenham Harry Redknapp oo doonayey in uu ugu yaraan helo dhibic qiimo weyn ugu fadhiday kulanka ka qaado ayaa wax ka badaley shaxdii uu ku ciyaarayey ee 4-4-1-1 isagoo badal ku sameeyey Assou-Ekotto & Lennon waxaana uu soo galiyey garoonka Sebastien Bassong & Defoe, isagoo shaxda ka dhigay 3-5-1-2 taasi oo aheyd shax weerar balse taasi uma noqon mid guul uu kala tago garoonka Stoke oo kooxdii booqata aanay raaxo kala kulmin.
Tottenham waxaa kale oo uga sii darey xaalada guuldarada iyadoo daqiiqadihii ugu dambeeyey uu kaarka cas ka qaatey ciyaaryahanka daafaca ah ee u dhashay dalka Al-Jeeriya Younes Kaboul.
Etherington (Daqiiqadii 13-aad)
Etherington (Daqiiqadii 43-aad)
Garoonka Stadium Britannia ee kooxda Stoke waxaa soo camiray 27,529 qof oo taageerayaal ah.
Kulamadii kale ee Sabtidii & Axadii
Sunderland oo todobaadkii hore daaqada ka tuurtey tababare Steve Bruce isla markaana shaqaaleysay 59 jirka u dhashay Ireland ee lagu magacaabo Martin O’Neill kaasi oo soo layliyey kooxaha Leicester, Celtic & Aston Villa ayaa guul ku bilowdey kulankii uu xilka kula wareegay oo ay wada ciyaareen kooxda jahwareersan ee Blackburn oo ay iska leeyihiin maalqabeenada reer Hindiya ee hilibka digaaga ka baayacmushtara.
Sunderland oo lagu naaneyso bisadaha madow (Black Cats), waxay ku marti galiyeen garoonkooda Stadium Light kooxda Blackburn waxaase lagaga hormarey gool ciyaaryahanka Simon Vukcevic uu dhaliyey, balse lix daqiiqo oo kaliya iyadoo ay ka dhiman tahay ciyaarta ayey laba gool oo deg deg ah dhaliyeen taasi oo meesha ka saartey rajadii Blackburn ay ka qabtey inay ku qaadato dhibcaha kulankaasi.
Guushaasi jilicsan ee Sunderland waxay ka saartey sadexda kooxeed ee ugu hoseeya table-ka kala horenta kooxaha, iyadoo kaalinta 17-aad ku jirta isla markaana kor uga kacdey heerka quusta ee looga baxayo ka qayb qaadasha Premier League-ga sanadka soo socda.
Swansea 2-0 Fulham oo ku kulmay garoonka The Liberty Stadium ee kooxda Swansea
Boton 1-2 Aston Villa oo isku arkay guriga Bolton ee Reebook Stadium.
West Bromwich 1-2 Wigan Athletic oo isku farasaarey guriga West Bromwich ee The Hawthorns.
Gool dhalinta Horyaalka Premier League-ga
Van Persie ————Arsenal 15 gool
Aguero—————–Man City 11 gool
Ba ———————Newcastle 11 gool
Rooney ————-Man United11 gool
Dzeko——————-Man City 10 gool
Yakubo—————–Blackburn 9 gool
Adebayor————-Tottenham 8 gool